Daawo: Siyaasi caan ka ah Somalia oo Gaas kula tartamaya doorashada P.land iyo Taariikhda Noloshiisa ! (Muuqaal) | KALSHAALE
Daawo: Siyaasi caan ka ah Somalia oo Gaas kula tartamaya doorashada P.land iyo Taariikhda Noloshiisa ! (Muuqaal)
Aug 10, 2018 - 8 Aragtiyood
Garoowe ( Kalshaale ) Wasiirkii hore ee Arrimaha Gudaha DFS Soomaaliya iskamarkaana soo noqdey Wasiirka waxbarashada Puntlan sanadihii Cabdi Faaraxa Siciid Juxa ayaa xalay ku dhawaaqay inuu u taaganyahay xilka Madaxweynaah Puntland ee 2019.
HALKAN KA DAAWO MUUQAAL TAARIIKHDA IYO NOLOSHII JUXA
kalshaale snm tii maka hadheen
gaas hal nin oo la tartami kara lama hayo aan ka ahayn morgan xafiduhulaah
GAAS BAA MADAXWEYNAHA AH waxba ma oga juxa. Puntland Gaas door taan waa muqadas
Kanu soo maaheyn jufadii yarey ee Faroolo, sanadkaan waxaa maqaayadda maamulaa Cismaan Max’uud.
Yaan lagu dheelin kaltanka Juuxa ee sug waqtiga Ciise Riyoole, haddii kale waxaan soo kaarikeynaynaa Reer Bariga dhiibo Canshuurta lagu shido Maqaayadda Max’uud Saleemaan.
asc dhamaan reer kalshaale
puntland maadka dhaaftid kala qubqubka waa shacab uhogaasamay horusocod iyo kala danbeyn
Puntland wexeedu doorasho maaha ee waa iska xulasho.
Meesha 66 xubnood oo baarlamaan Ku sheeg ah,oo iyaba Ku yimi xulasho reernimo ayaa doorta hadba ninkii ugu jeeb roon ee iibsan kara.
Midda kale ee jirtaana waa sidaa Dabshid sheegay oo bahashu waa kaltan ilma maxamuud saleebaan ah kkkkk .